आज भानु जयन्ती, के हुन् भानु |
आज भानु जयन्ती, के हुन् भानु
प्रकाशित मिति :2018-07-13 05:35:10
काठमाडौं/असार २९– नेपालको साहित्य क्षेत्रमा ठूलो योगदान पु¥याउने आदि कविको सम्झनाका गर्दै अाज २०५ अाैं भानु जयन्ती मनाईंदैछ ।
कवि गोपाल पौडेले आषाढ २९ गते भानुभक्त आचार्यको जन्म जयन्ती मनाउने आह्वान गरेपछि वि.सं. २०१२ सालदेखि भानुभक्त जयन्ती मनाउन थालिएको हो । त्यसवर्ष देखि हरेक वर्ष आषाढ २९ गतेका दिन नेपाल तथा भारतमा भव्यताका साथ भानु जयन्ती मनाइन्छ । विशेष गरी विद्यालयहरुमा भानु जयन्तीका अवसरमा कविता वाचन तथा लेखन प्रतियोगिताको आयोजना हुने गर्दछ ।
को हुन् भानु ?
उनी नेपाली साहित्यका प्राथमिक कालका प्रतिनिधि कवि हुन् । उनीले वाल्मीकिद्धारा संस्कृतिमा लेखेको रामायणलाई नेपाली भाषामा अनुवाद गरी नेपाली भाषाको विकास गरेका थिए ।
उनको जन्म नेपालको तनहुँ जिल्लाको चुँधी रम्घा भन्ने ठाउँमा वि.सं. १८७१ असार २९ गते धनञ्जय आचार्य र धर्मावतीदेवीका छोराका रुपमा भएको थियो । उनका हजुरको नाम श्रीकृष्ण आचार्य हो । उनले हजुरबाबाटै शिक्षा पाएका थिए भने उनी सानैदेखि नेपाली भाषाको कवितामा बोल्थे, कवितामा गाउँथे र नाच्थे ।
उनीले घाँसीबाट जीवनमा केही गर्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा पाएका थिए । घाँसीले घाँस काटेर पाटी पौवा बनाउने इच्छा राखेको देखेर भानुभक्तले पनि केही न केही गरी नाम कमाउनुपर्छ भनि प्रेरणा पाएको भनाइ छ । उनले नेपाली साहित्य क्षेत्रमा पु¥याएको योगदानको कदर गर्दै नेपालको पहिलो कवि नभएपनि उनलाई आदिकविको उपाधिद्धारा सम्मान गरिएको छ । उनका कृतिहरु प्रश्नोत्तर, वधूशिक्षा, भक्तमाला र रामायण हुन् । बहुआयामिक व्यक्तित्व उनीले संस्कृत भाषामा लेखिएको अध्यात्मरामायणलाई नेपाली भाषामा मात्र लेखेनन् कि छन्दगत विविधता पनि मिसाएका छन् । उनले रामायणमा शिखरिणी, मन्दाक्रान्ता, वंशस्थविलं, मालिनी, स्रग्धरा सहित १३ वटा शास्त्रीयछन्द प्रयोग गरेको छन् । उनीले रामायणमा शार्दूलविक्रीडित छन्दलाई सबैभन्दा बढी प्रयोग गरेका छन् ।
आशुकवित्वका गुण भएका भानुभक्त आचार्यलाई सबैको सामु चिनाउने काम भने कवि मोतिराम भट्टले गरेका थिए । भानुभक्त साहित्यिक यात्रामा मात्र थिएनन, उनी ज्योतिषशास्त्र पनि जान्थे । यस्ता महान कविलाई हरेक वर्ष भानु जयन्ती भानु जयन्तीका दिन सम्झने गरिन्छ । साहित्यीक स्रष्टाहरुको तर्फबाट पनि विभिन्न कार्यक्रमहरु गरी भानु जयन्ती मनाइन्छ । प्रज्ञा प्रतिष्ठा भवन कमलादीमा यसदिन विशेष र भव्य कार्यक्रमको आयोजना हुने गरेको छ । यस कार्यक्रममा विभिन्न स्कुलका विद्यार्थीहरु सहभागी हुनुका साथै कविता वाचन, नाटक प्रस्तुत गरिन्छ ।